Dyson ဟာ 360 မျက်လုံးဖုန်စုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Dyson ဟာ 360 မျက်လုံးဖုန်စုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Dyson ဟာ 360 မျက်လုံးရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေစက်ရုပ်လေဟာနယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအပေါငျးတို့သအခြားသူများထက်သန့်ရှင်းရေးမှာပိုမိုကောင်းမွန်င်, ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်.
ဗြိတိန်နိုင်ငံကသန့်စင်ထုတ်လုပ်တဲ့ရဲ့ပထမဆုံးစက်ရုပ်လေဟာနယ်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေရကျိုးနပ်ခဲ့, ဒါပေမဲ့အများကြီးကုန်ကျ, အခုအချိန်မှာရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းလှေကားမပြုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောမကနိုင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Dyson ဟာ 360 မျက်လုံးလေဟာနယ်ပြန်လည်သုံးသပ်: ယူတာပဲသောစက်ရုပ် (ဒါပေမဲ့အကောင်းတစ်လမ်းအတွက်)” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့9သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Dyson ဟာရဲ့ 360 မျက်လုံးစက်ရုပ်လေဟာနယ်သန့်စင်နောက်ဆုံးတော့ဂျပန်အတွက်ကျယ်ပြန့်ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဗြိတိန်တွင်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဟုဆို. ဘယ်လိုစျေးကွက်ဦးဆောင်ဆန့်ကျင်တက်သီးနှံများကိုပုံပါဘူး Roomba - ကဝယ်ယူရကျိုးနပ်မယ့်ဖြစ်ပါသည်?
အဆိုပါအထိုင်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, စက်ရုပ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ကိုအားသွင်းဖို့မောင်းသောပေါ်သို့တစ်ဦးမှာ chrome အဆက်အသွယ်-ဖုံးလွှမ်းခြေဖြင့်အဖြူ panel က. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ 360 မျက်လုံးအများဆုံးအခြားစက်ရုပ်လေဟာနယ်ထက်သေးငယ်ကြီး၏နှစ်ဦးစလုံးသည်. ဒါဟာအချင်းအတွက် 23cm ရဲ့, သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်ထက် 12cm လျော့နည်းသောဖြစ်ပါသည်, အ iRobot Roomba 900 စီးရီး, ဒါပေမယ့်လည်းအရပ်ရှည်ရှည် 12cm ရဲ့, သော Roomba ထက်က 3cm ကြီး၏စေသည်.
ဆိုက်ကပ်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အချိန်အများစုကိုသုံးစွဲအဖြစ်, ထို 360 မျက်လုံးကျယ်ပြန့်ပြိုင်ဘက်ထက်သိသိသာသာလျော့နည်းကြမ်းပြင်အာကာသကိုတက်ယူ, သောကပိုမိုလွယ်ကူနှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်စေသည်, နှင့်၎င်း၏သေးငယ်တဲ့အချင်းကလည်းတင်းကျပ်တဲ့ကွာဟချက်၏သို့ထွက်ရနိုင်ဆိုလိုသည်. ဥပမာအားဖြင့်, ထို 360 သငျသညျစီစဉ်ထား-စင်ကြယ်သောနံနက်အပေါ်ကျောက်ပြားကို၏ထိပ်ပေါ်မှာကုလားထိုင်သီးနှံများကိုပုံမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒါကြောင့်မျက်လုံးပြိုင်ဘက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့စားပွဲနှင့်ကုလားထိုင်ခြေထောက်၏အတွင်းနှင့်ထွက်မျိုးကိုရက်နိုင်.
မျက်စိက၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၏ 360 ဒီဂရီအမြင်ပေးကြဖို့ထိပ်တန်း၏မာနထောင်လွှားထိုင်, ဒါပေမယ့်စက်ရုပ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထက်ပိုမိုတိုတောင်းသောအရာတို့ကိုမမွငျနိုငျ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
စက်ရုပ်၏ထိပ် 360 ဒီဂရီကင်မရာကရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အခန်းထွက် map မှတ​​စ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အကောင်းဆုံးကြံစည်သော, အများဆုံးအကျိုးရှိစွာသန့်ရှင်းရေးလမ်းကြောင်းကို. စက်ရုပ်များကဖမ်းဆီးရမိအဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်စက်ရုပ်အရွက်ဘယ်တော့မှ.
အဆိုပါအထိုင်စက်ရုပ် drives တွေကိုအားသွင်းဖို့ရာမှပေါ်မှာ chrome strips တွေနှင့်အတူတစ်ရိုးရှင်းသောအဖြူရပ်တည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. နှစ်ဦးနှင့်အနက်ရောင်အဖြူကွက်ရင်ပြင်စက်ရုပ်ကိုအထိုင်မြင်ကထိပ်တန်းတက်လိုအပ်ပါတယ်သောအခါမှပြန်လာပြီးကူညီ, ၎င်း၏တစ်ဦးထက်ပိုအခန်းလုပ်နေလျှင်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောလုပျမညျသော. ပိုလျှံကေဘယ်တန်ခိုးတော်ကို adapter အတွက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်, စက်ရုပ်တက်စို့လာကနေစောင့်ရှောက်ခြင်း.
Android နှင့် iOS အတွက်အဆိုပါ Dyson ဟာ Link ကို app ကိုဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြု, အမှား၏အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်ရောဂါ, တစ်ဦးလွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှုထုံးစံ၌. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ 360 မျက်လုံးချိတ်ဆက်ထုတ်ကုန်များ၏ Dyson ဟာရဲ့ပထမဆုံးလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အများနှင့်အတူ Dyson ဟာ Cool Link ကို, နည်းလမ်းဟာသူ့ရဲ့အပြင်အဆင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအများစု Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက် Dyson ဟာ Link ကို app ကိုမှ offloaded ခဲ့ကြစဉ်.
သင်ဆဲထိပ်ပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းခလုတ်ကိုသုံးပြီးစက်ရုပ်သန့်ရှင်းရေးသတ်မှတ်နိုင်သည်, သင်မူကား, app ကိုလိုအပ်ကြိမ်သန့်ရှင်းရေးအချိန်စာရင်း. အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့နှင့်သင့်ကို Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် - ငါ့ဖို့စနစ်တကျချိတ်ဆက်ဖို့သုံးကြိုးစားမှုကိုယူ (ဝန်ခံရမည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီး) Multi-ကွန်ယက်ကိုတည်ထောင် - app ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအထဲကစက်ရုပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်, အိမ်တွင်မယ့်.
စီစဉ်ခြင်းနေ့တိုင်းပုတ်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်, သို့မဟုတ်ထိုရက်သတ္တပတ်၏အချိန်နှင့်နေ့ရက်ကိုကောက်နေနှင့်ပြန်လုပ်ဖို့က setting, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ. ဒီ app ပြီးတော့ရှေ့ဆက်တစ်စီစဉ်ထားသည်စင်ကြယ်၏သငျသညျအကြောင်းကြားနှင့်စက်ရုပ်လက်စသတ်တော်မူပြီတခါနိုင်. သငျသညျကရရှိနိုင်ပါကြမ်းပြင်အာကာသဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းကိုမွေးမွနျးနိုင်အောင်ကြောင့်လည်းသင်စက်ရုပ်ခဲ့ဘယ်မှာ၏မြေပုံပြသထားတယ်, အရာရှိဖှယျဖြစ်ပါတယ်.
ထိုအင်္ဂါရပ်များအားဖြင့် run သော app ကိုသို့တည်ဆောက်နေတဲ့အစိုင်အခဲထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်ရှိပါတယ်, အဘယျအရာနည်းနည်းတတ်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း. Dyson ဟာသငျ့အိမျမှပတ်ပတ်လည်လာနှင့်သင်တို့အဘို့အက install ရှိသည်ဖို့ရွေးစရာတခုလည်းရှိပါတယ်.
အဆိုပါဖြီးဘားစက်ရုပ်၏ပြီးပြည့်စုံသော width ကိုဖုံးလွှမ်း, ခူကောင်အပုဒ်ကြောင့်ရထားဘီးထက်နည်းနည်းပိုပြီးဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲပေးစဉ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ခြောအ Dyson ဟာရှိပါတယ် 360 မျက်လုံးလက်ရှိရရှိနိုင်စက်ရုပ်ကိုဖုနျစု၏ဆုံးစေ့စေ့စပ်စပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအပြည့်အဝ-width ကိုဖြီးဘားနှင့်အစိုင်အခဲစုတ်ယူခြင်းတစ် Roomba ထက်သိသိသာသာပိုပြီးဖုန်နှင့်ဒဏ်ငွေမြေမှုန့်ကိုယူလိုက်တယ်င်. Dyson ဟာသူ့ရဲ့ရူပါရုံကိုစနစ်ကလည်းအများကြီးပိုထိရောက်လျော့နည်းစျေးကြီးဖု-sensing မော်ဒယ်တွေထက်ဆို, က္ထုသို့တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးအခန်း map.
၎င်း၏အစွန်း-သန့်ရှင်းရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုလည်းနားမှာချည်ငင်စုတ်တံအပေါ်အားကိုးကြောင်းအများဆုံးအခြားသူများထက် သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးရမည်မဟုတ်. လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်အခြားစက်ရုပ်လေဟာနယ်လိုပဲ, ထို 360 မျက်လုံးအလုပျ၏အမြောက်အများပြုပါဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဖုန်တည်ဆောက်ဖွင့်ထိပ်ပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ရန်. သင်ဆဲလှေကားနှင့်စက်ရုပ်မရောက်ရှိနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုရှင်းလင်းဖို့အခြားလေဟာနယ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
စင်ကြယ်သောကြောင့်အကဲခတ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်. အဆိုပါ 360 မျက်လုံး5သန်းနဲ့ရင်ပြင်ထဲမှာစတုရန်းလိမ်ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း. ဒါဟာပိတ်ဆို့ခဲ့ခြင်းသည်တိုင်အောင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ထို့နောက်လာမည့်စတုရန်းပေါ်သို့ရွေ့လျားရှေ့တော်၌ထိုစတုရန်းအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်. space ကိုခွင့်ပြုမထားဘူးဆိုရငျ, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာ galley မီးဖိုချောင်ရဲ့အရှည်အဖြစ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးထက်ပိုယုတ္တိ zig-zag ပုံစံတူအဘယျသို့ပြောင်းရန်လိမ့်မည်.
ထိုဘင်ထွက်ရိုက်ယူခြင်းကြောင့် emptying မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ဘင်သည်နှင့်သင်အထူးသဖြင့်ညစ်ပတ်ပေရေကော်ဇောရှိပါကသင်ကနှစ်လယ်ပိုင်းတွင် run သွန်ဖို့ရှိသည်စေခြင်းငှါ,. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါစက်ရုပ်ခူပုဒ်ရှိပါတယ်, အစားရထားဘီးထက်, သောထိုသို့သောအခန်းတံခါးမှအထူကျောဇောနှင့်အသေးစားနှုတျခမျးအဖြစ်သေးငယ်တဲ့ဘို့ကျော်ရကူညီပေးသည်. ထိုရူပါရုံစနစ်ကိုကာကွယ်တားဆီး 360 ကြီးမားသောအမှုအရာနှင့်နံရံသို့ crashing မှမျက်လုံး, ဒါပေမယ့်နေဆဲကုလားထိုင်ခြေထောက်နှင့်အခြားပိန်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုရိုက်.
သက်ရောက်မှုများအတွက်ကြားခံအဖြစ်ခန်ဓာကိုဆိုင်း၏တပြင်လုံးကိုထိပ်တန်း, သငျသညျမြျှောလငျ့စခွေငျးငှါထက်ပိုမိုဖြစ်ပျက်သော, ဒါပေမယ့်လူအများနဲ့မတူပဲ အခြားဖုစတိုင်သန့်ရှင်းရေး, ထိုသို့ဖွင့်နှင့်ပွတ်သပ်ကိုယ်တိုင်ကတစ်မျက်နှာပြင်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ဒါကြောင့်သင်စေခြင်းငှါမဆိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချောသို့မဟုတ်ကရိယာအထိမ်းအမှတ်မည်မဟုတ်ပါဘူး.
အကြောင်းပြီးနောက် 45 အားသွင်းဖို့ခြေထောက်ကိုဘူတာရုံမှစက်ရုပ်ပြန်သန့်ရှင်းရေး၏မိနစ်, ရုံအောက်မှာကြာသော2တစ်နှစ်ခွဲနာရီ. ဒါဟာထို့နောက်သူကတရားစွဲဆိုရဲ့တချိန်ကကမရောက်နိုင်ဘူးသော bits သည် ထွက်. အပြီးသတ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်လည်းကားမောင်းခြင်းနှင့်ခြေရင်းဘူတာမှင့်လာသောအခါ၎င်းသည်စုတ်ယူခြင်းနှင့်ဖြီးဘားပိတ်, နှင့်လည်း pauses နှင့်တ္ထုပတ်ပတ်လည်နည်းလမ်းများကိုထွက်အလုပ်လုပ်တယ်စဉ်.
အဆိုပါစက်ရုပ်ဖြစ်နိုင်ပျမ်းမျှ bedstead အောက်မှာ fit ဖို့လုံလောက်တဲ့တို. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ 360 မျက်လုံးလေဟာနယ်၏ဆိတ်ငြိမ်ဆုံးမသည်နှင့်သင်တို့ကိုအနီးသန့်ရှင်းရေးစတင်သည်လျှင်သင်ရုပ်မြင်သံကြားကြားနာတားဆီးဖို့လုံလောက်တဲ့အသံကျယ်သည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအခြားသူများထက် ပို. သာယာသောအစေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်. Dyson ဟာပိုပြီးသည်းခံဖြစ်ရန်၎င်း၏လေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေး၏အသံလစ်လျူရှုနှင့်တကယ့်တစ်ဦးခြားနားချက်ကိုဘယ်လိုကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်စေသည်. ထိုသို့သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတယ်စဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်တို့၌လည်းရှိမညျမဟုတျ, သို့သော်.
နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးက Pop-ပယ် panel ကို Post-မော်တာ filter ကိုထုတ်ဖော်ပြသ, pre-မော်တာ filter ကိုအမှိုက်ပုံးထဲနောက်ကွယ်မှထိုင်နေစဉ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ထိုစဉ်တွင် 360 မျက်လုံးအလေဟာနယ်ပြုပါနှင့်တရားစွဲဆိုကိုယ်တိုင်ကစောင့်ရှောက်မည်, လိုအပ်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်နည်းနည်းရှိပါတယ်. သင်ကြိုတင်နဲ့ post-မော်တာ filter များကိုလျှော်ဖို့ရှိသည်တစ်လပြီးတာနဲ့, detach ဖို့လွယ်ကူနေသော – နောက်ကျောမှာတယောက်နှင့်ဘင်အနီးတစျ – တစ်ဦးကိုထိပုတ်ပါအောက်မှာ run နှင့်အဘို့အခွောကျသှေ့ပါစေ 24 နာရီ.
အဆိုပါ 0.33L ဘင်အချည်းနှီးသောရန်အလွန်လွယ်ကူသည်. ရုံထိပ်ပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရေးအတွက် button ကိုနှိပ်, ကဆွဲထုတ်, အဖုံးကိုလွှင့်ခြင်းနှင့်ဘင်သို့လှုပ်ခါ. တစ်ဦးက 30 အများဆုံးမှာဒုတိယအလုပ်.
အဖြီးဘားမှပိတ်ဆို့ခြင်းရှင်းလင်းရေးရိုးရှင်း. ဒါဟာဘက်မှ unscrewed နှင့်ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ကလုပ်ဖို့လိုအပ်ဘယ်တော့မှတွေ့ရှိရ, ပင်စားပြီးမှဖိနပ်ဇာများအတွက်.
တစ်နေလည်းစင်ကြယ်သောကော်ဇောပေါ်တစ်ခုမှာသန့်ရှင်းရေးပြေး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါကြောင့်အင်တာနက် connection ကိုရှုံးခဲ့လျှင်, အချိန်ဇယားဆွဲနည်းနည်းထိခိုက်ခြင်းနှင့်လွဲချော်ဖြစ်ပေါ်လာသော
အဆိုပါ 360 မျက်လုံးစင်ကြယ်သောတစ် perceivable အဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဖြစ်မကြာခဏအချို့ကိုအခြားသူများအဖြစ် run ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး
ထိုသို့ပြုပါလိမ့်မယ် 20 အောက်မှာအတွက်ပရိဘောဂနှင့်အတားအဆီးများ၏အမျိုးမျိုးသော-bits နှင့်အတူကော်ဇော၏တစ်စတုရန်းမီတာ 30 တစ်စက္ကန့်တာဝန်ခံစရာမလိုဘဲမိနစ်
အဆိုပါ Dyson ဟာ 360 မျက်လုံး£ 800 ကုန်ကျ. နှိုင်းယှဉ်, iRobot ၏ Roomba 980 အမြင်အာရုံအညွှန်းလည်း£ 800 ကုန်ကျနှင့်အတူ, ထုရိုက်-အညွှန်းစက်ရုပ်လေဟာနယ်ပတ်ပတ်လည်£ 150 မှာစတင်ဖွင့်စဉ်.
အဆိုပါ Dyson ဟာ 360 မျက်လုံးရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေစက်ရုပ်လေဟာနယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအပေါငျးတို့သအခြားသူများထက်သန့်ရှင်းရေးမှာပိုမိုကောင်းမွန်င်, ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်. ဒါဟာ Roomba အဖြစ်များစွာသောအမှုအရာအောက်မှာမရနိုင်, ဒါကြောင့်ဆဲပါးလွှာသောအမှုအရာသို့ bumps နှင့်နေဆဲအရာအားလုံးသန့်ရှင်းရေးမရနိုငျ, ဒါကြောင့်သင်ပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုအပျတစ်ခုတည်းသောလေဟာနယ်မဟုတ်ပါဘူးအဓိပ္ပာယ်.
ယင်း၏သေးငယ်တဲ့ခြေရာစားပွဲနှင့်ကုလားထိုင်ခြေထောက်နှင့်အနီးတဝိုက်ရရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်ခြားနားချက်ကို, ၎င်း၏အထိုင်ပေါ်မှာထိုင်သောအခါကလျော့နည်းအာကာသကိုတက်ယူ, ကျဉ်းကျုတ်တိုက်ခန်းနှင့်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ထဲမှာအတူရှင်ဖို့ကအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်ရာ.
စက်ရုပ်လေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေးနေ့တိုင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်ကိုဖုန်စုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်, အရာမှထွက်-and ထွက်ပါဝါကိုသန့်ရှင်းရေးအဖြစ်တာအရေးမပါဘူးဟုဆိုလိုသည်. ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးကအထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့အဆင့်ဆင့်ရပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှ, သငျသညျအရာတစ်ခုခုဖိတ်လျှင်သင်ပြီးတော့အဲဒီမှာတစ်လေဟာနယ်ထဲကအရင့်ကိုရှင်းလင်းမယ့်အစားစက်ရုပ်ကြောင့်ထားခဲ့ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိနေ.
သငျသညျထိုကြောင့်လျော့နည်းနိုင်စွမ်းစက်ရုပ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်တာငြင်းနိုင်, ဒါပေမယ့် 360 မျက်လုံးလည်းစင်ကြယ်၏တစ်ဦး perceivable အဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဖြစ်မကြာခဏအချို့ကိုအခြားသူများအဖြစ် run ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသိမ်းကျုံးအပေါ်ပိုပြီးရရှိသွားတဲ့အတိအကျသောကြောင့်,. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောရက်မတူညီတဲ့ဒေသတွေကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြမ်းပြင်အကြားလွှဲပြောင်းဖို့လည်းလွယ်ကူပါတယ်.
ဒါဟာအများကြီးကုန်ကျ, ကမစုံလနှင့်ဆက်ဆက်လူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-ဝယ်မဖြစ်. သို့သော်ထိုသို့အခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးကိုစက်ရုပ်လေဟာနယ်ဖြစ်ပါသည်.
အကောင်းအဆိုး: တင်းကျပ်တဲ့ကွာဟချက်အတွက်ကိုက်ညီ, အသီးအသီးပြေးအပေါ်ပိုကောင်းသန့်ရှင်းရေး, တစ်ဦးထက်ပိုသာယာသောအသံဗလံကို, ပိုကောင်းတဲ့အစွန်းသန့်ရှင်းရေး, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ကောင်းသော app ကို, ရိုးရှင်းသောအချိန်ဇယားဆွဲ
Cons: အဖြစ်တာပရိဘောဂအောက်တွင်မရနိုင်, စျေးကြီး, သင့်ရဲ့သာလေဟာနယ်မဖွစျနိုငျ, တွန်းအားပေး-button ကိုသန့်ရှင်းရေးထက်ကျော်လွန်အများဆုံး feature များအဘို့အင်တာနက်လိုအပ်ပါတယ်, အားလုံးစက်ရုပ်လေဟာနယ်တူမှီဝဲရနိုင်
အဆိုပါ Dyson ဟာ 360 အ Roomba ထက်သေးငယ်တဲ့အချင်းရှိပါတယ် 880 ဤနေရာတွင်ပုံ, ဒါပေမဲ့ကြီး၏ဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
iRobot Roomba 880 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: နီးပါးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့တစ်စက်ရုပ်လေဟာနယ်သန့်စင်
Dyson ဟာ V8 Absolute ပြန်လည်သုံးသပ်: ဖြောင့်မတ်ဖို့နောက်ဆုံးတစ်ကော့ဒလက်အခြားရွေးချယ်စရာ
အပိုဒ်, Dyson ဟာ, Ltd, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, စက်ရုပ်, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ
← Samsung ကမိတ်ဆက်က Galaxy Note ကို7သင်သည်ကိုယ်မျက်စိနှင့် Unlock နိုင်သလား phablet သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုသင်ကစဉ်းစားပါသကဲ့သို့တိကျမှန်ကန်သောဖြစ်ပါသည်? →